3A Ukomiswa Kwegesi Yemvelo, i-HDS yeNaphtha, Advanced Alumina Clause Catalyst - Gascheme
IShangchche Gascheme Co, Ltd. (SGC), umhlinzeki wamazwe omhlaba wokuqina kanye ne-adsorbents. Ithembele ekuphumeleleni kwezobuchwepheshe kwesikhungo sethu sokucwaninga, i-SGC izinikela ekusunguleni, ekukhiqizeni nasekusabalaliseni izixazululi kanye nezikhangisi ezikhungweni zokuhluza, ezimbonini zamakhemikhali nezamakhemikhali. Imikhiqizo ye-SGC isetshenziselwa kabanzi ukwenza izinguquko, i-hydrotreating, i-steam-reforming, i-sulfur-recovery, i-hydrogen-production, igesi yokwenziwa, njll.
Ama-catalysts kanye nababonisi be-adsorbents ekuhlanzeni uwoyela, ama-petrochemicals kanye nokucwengwa kwegesi yemvelo.Isifundo Esibonakalayo kanye ne-Basic Engineering Design yenqubo yokuhluza uwoyela namayunithi.
I-R & D ezintweni zokwakha (amaZeolites) nama-catalysts. I-R & D ekusetshenzisweni kokuhluza uwoyela (hydrotreating / hydrocracking / reforming / isomerization / dehydrogenation) nokucutshungulwa kwegesi yemvelo (isigatshana / i-TGT).
Ochwepheshe beqembu abanokuhlangenwe nakho okucebile ku-R & D nokusebenza okusebenzayo ngezidingo zakho.
052020 / Novemba
Indlela yokuphendula ebusweni (i-RSM) isetshenziselwe ukutadisha inqubo ye-nitric acid leaching yemfucumfucu Co Mo esekwe ku-hydrotreating catalyst. Inhloso yalokhu ...